thinzar's blog: နေ့ကလေးထိန်းကျောင်း ပြဿနာ
kaung par ei...
29/7/08 1:49 PM
yan way aung>> တော်သေးတာပေါ့။ ကောင်းတယ်လို့ ပြောတဲ့သူ ရှိလို့ :-) ဒီလိုဆိုရင်တော့ နောက်အပုဒ်တွေ ဆက်ပြီး ဘာသာပြန်ဦးမယ်။
31/7/08 10:51 AM
တစ်ကယ် ကောင်းတဲ့ ဆောင်းပါး တစ်ပုဒ်ပဲဗျာ. ကျွန်တော် Reader ကနေ ဖတ်ပြီး ပြန်ရှယ်ယာ လုပ်ထားတယ်.
အလွဲတွေ ထဲက အလွဲတစ်ခုပါပဲဗျာ. ပေးချင်တဲ့ Message နဲ့ ယူလိုက်ကြတဲ့ Message လွဲကြတဲ့ ပြဿနာတွေပေါ့.
အားပေးနေပါတယ် မသဉ္ဖာရေ. :)
4/8/08 12:23 AM
mhaw sayar>> အင်း..ဟုတ်တယ်။ ဒီစာအုပ် တစ်အုပ်လုံးမှာ အဲဒီလို ဥပမာတွေအများကြီးဘဲ။ ကိုယ်မထင်ထားတဲ့ အဖြေတွေ ထွက်လာတာ များတယ်။
6/8/08 3:32 PM